Somaliland: Xildhibaan Dhakool Gefaf Sharci ayuu Qarannimada Ka Galay • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Somaliland: Xildhibaan Dhakool Gefaf Sharci ayuu Qarannimada Ka Galay
Somaliland: Xildhibaan Dhakool Gefaf Sharci ayuu Qarannimada Ka Galay
Madaxtooyada Somaliland ayaa markii u horraysay ka hadashay xariga xildhibaan Dhakhuul oo ka tirsan gollaha wakiiladda ee maamulka Somaliland.
Afhayeenka Madaxtooyada Somaliland Maxamuud Warsame Jaamac
Afhayeenka madaxweyne Muuse biixi, Maxamuud Warsame Jaamac oo warbaahinta magaaladda hargaysa kula hadlaya ayaa sheegay in xildhibaan Dhakool uu gefaf sharci uu ka galay qaranimada Soomaalinad.
Waxaa kaloo uu afhayeenku eedayn u soo jeediyay guddoomiyaha xisbiga mucaraadka Somaliland C/raxmaan Ciro oo sharci daro ku tilmaamay xariga lagula kacay xildhibaan Dhakool
“Xildhibaan Dhakool sharci-darro kuma xidhna ee wuxuu ku xidhan yahay sifo sharci ah, wuxuuna si cad ugu xa-gudbay jiritaanka qarannimada Somaliland, sharciyadda iyo Dastuurka uu xildhibaanka ku yahay” Sidaas waxaa yiri afhayeenka xukuumadda Somaliland.
Afhayeenku wuxuu ku eedeeyay xildhibaan Dhakool afar qodob oo kala ah
 Maalintii la qixiyey beelaha darafyada.
Ciidamada Somaliland ayaa xili habeen ah weeraray guriga uu ka degan yahay Hargaysa Xildhibaan, iyagoo xabsiga u taxaabay oo uu ku xiran yahay muddo toddobaad ah. Xildhibaanka ayaa ka soo jeeda gobolka Sool.
Hoos ka akhriso eedaha kale ee Afhayeenku u soo jeediyay Xildhibaan Dhakool.
Sidaa awgeed, waxa aan shacbiga u sheegayaa gefkaa cad ee qaranka laga galay Guddoomiye Cabdiraxmaan Cirro-na ka doodayo sharci darrona ku tilmaamay inuu macneheedu yahay inuu ku raacsan yahay oo uu la qabo inay 18 May tahay maalin madow.